Maalin: Janaayo 3, 2018
Maalgashiga Gaadiidka Gaadiidka Mersin ee Horumarka
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, ayaa wali kusii wadaysa weerarada Mersin. Basaska cusub ee loo yaqaan '30' ee loo iibsado khadadka ugu mashquulka badan Mersin ayaa tirinaya maalmihii la siin lahaa dadka deggan Mersin. Qaabdhismeedka isbeddelka gaadiidka [More ...]
Antalya Gawaarida 2017 350 kunka qof ee ugu sareeya
Tünektepe Teleferik, oo loo keenay magaalada Antalya Metropolitan Municipal iyadoo la xaqiijinayo riyada sanadlaha ah ee 30, waxay xNUMX kun oo qof soo booqatay shirkii 2017. Gaariga fiilada leh wuxuu noqday mid ka mid ah meelaha soo jiidashada leh ee Antalya. Feelo cagahaaga ayaa laga gooyn doonaa dhulka ” [More ...]
CHK, CHK, ayaa waydiisatay Raisalwasaaraha Soomaliya ee Soomaliya
Kuxigeenka CHP Burdur Dr. Mehmet Göker wuxuu hordhigay su’aalo qoraal ah Raiisul wasaare Binali Yıldırım oo ku saabsan mashruuca tareenka Xawaaraha Sare. Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare, oo loo maleynayo inuu dhex maro Burdur, ayaa si dhow u socda [More ...]
leedahay State-Enterprise (SOE), kuwaas oo haatan heysta boqolkiiba qaybta xnumx'lik gaarey 70 bilyan oo maal-Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) General Directorate of shuqullada ka qandaraaslaha ee ka maqan heshiiska 45 2016 baabuur Inkastoo [More ...]
3. bedelka garoonka diyaaradaha airalim
Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ayaa la kulmi doonta baahida shidaalka ee diyaaradaha. Sida ku xusan qorshaha cusub, dhererka biyo-gogosha, oo ka ilaalin doona dekedaha hirarka, ayaa lagu fidin doonaa mitirka 100. [More ...]
Darawallada MOTAS waxaa la siiyay 'Tababar Taraafik ah oo loogu talagalay Siyaabaha Gaadiidka Dadweynaha'
Seminarka Tababarka Waaxda Gaadiidka Gaadiidka ee Booliska Magaalada Malatya wuxuu qabtay labo maalmood. Goobta taraafikada ee nolosha aadanaha oo leh boggag waxbarasho iyo muuqaallo kala duwan xilliyada shilalka [More ...]
IZBAN Waxay xireysaa 2017 oo ah rakaab
Bixinta adeegyo gaadiid dadweyne oo aad muhiim u ah oo ku yaal waqooyiga-koonfur-galbeed ee İzmir, İZBAN waxay gaartay rakaabka 515 milyan wadarta guud tan iyo markii la aasaasay. Iyada oo furitaanka khadka SEL lineUK, 136 la gaarey [More ...]
UPS (NYSE: UPS), oo maamusha mid ka mid ah maraakiibta waaweyn ee xamuulka qaada ee ganacsi ee adduunka, ayaa ku dhawaaqay in Tesla ay horay u amartay 125, oo ka mid ah gawaarida cusub ee korantada oo buuxa. Gawaarida cusub, korantada UPS, gaaska dabiiciga ah, propane iyo dhaqameed kale [More ...]
MHP Gudoomiyaha Degmada Inegol Bedir wuxuu jawaab ka bixiyay gaadiidka
Madaxweynaha MHP Inegol Hayati Bedir, oo ka bilaabaya maalintii ugu dambeysay wuxuu dhaleeceeyay socodka dadka ee Inegol, "Mushaarka ugu yar ee xawaaraha sare ee 200 TL 72 TL waa la dhalaalay," ayuu yidhi. Sharaxaada ku saabsan mowduuca [More ...]
RayHaber 03.01.2018 Warbixinta Shirka
Adeegga Dheeraadka ah ee la Qaadanayo Adeegga Nadiifinta ayaa la qaadi doonaa
Kordhinta gaadiidka dadweynaha ee Moscow
Magaalada Moscow, caasimada Ruushka, khidmadaha gaadiidka dadweynaha ayaa laga kordhiyey laga bilaabo Janaayo 2 dhanka 2018. Lagu habeeyay sicir bararka, ayaa sheegay in heerka socodka socodka uusan ka badneyn boqolkiiba 3,8. Waaxda Gaadiidka ee Moscow ayaa warsaxaafadeed u soo saartay mowduuca [More ...]
Boqolaal darawal ah ayaa maraya buundada saddexaad oo leh OGS
Magaalada Istanbul, buundada 'cez saddexaad', oo loo yaqaan Buundada Yavuz Sultan Selim iyo wadooyinka isku xira, ayaa lagu daray ciqaabyada xadgudubyada aan ka aheyn macluumaadkooda. OGS iyo HGS, oo bixiya bixinta khidmadaha waddooyinka [More ...]
IMM: 6 oo ka kooban mashaariicda mitrooga, laakiin aan la joojin
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul, wararka ku saabsan in la kansalay mashruucii tareenka dhulka hoostiisa ka jiray ee war saxaafadeedka, 2017 la sameeyay sanadkii iyo khadka 6 oo ka kooban mashaariic tareenada dhulka hoostiisa mara, ayaa sheegay in hindisada la kansalay. Istanbul [More ...]
Gawaarida cusub ee tareenka ayaa ka ifaysa Izmit. Waxa ku xigta Uğur Mumcu Park, dhisme cusub ayaa laga dhisayaa meel ku dhaw khadka tareenka ee jira. Kocaeli waxaa ku yaal fikrad gaar ah oo taraam ah oo taraafka noloshu ka mid tahay. [More ...]